ARTUZ Inoti Zvikoro zveHurumende Hazvina Kugadzirira Zvakakwana Kudzivirira Covid-19, Hurumende Ichiti Inogutsikana
ARTUZ inoti zvikoro zviri pasi pehurumende zvakawanda hazvisi kuzadzisa zviga zvakatarwa nebazi redzidzo yepasi panyaya yekudzivirira Covid-19 muzvikoro.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi, re Amalgamated Rural teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 muzvikoro, kana kuti Standard Operating Procedures
Gwaro raburitswa nesangano iri richitarisa mamiriro akanga akaita zvinhu muzvikoro kusvika muna Kubvumbi wegore rino rinoratidza kuti matunhu ose emunyika ari gumi ari pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana panyaya dzekuzvidzivirira kubva kuCovid-19.
Dunhu reBulawayo riri pazvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana (45%), richiteverwa nedunhu reHarare iro riri pazvikamu makumi mana nezvina kubva muzana (44%) kuchitiwo Matabeleland South iine zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana (31%) kuchizoti Manicaland iri iyo dunhu riri pasipasi riine zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana, kana kuti 28 percent.
Sangano iri rinoti zvikoro zvizhinji zvisiri kukwanisa kuzadzisa zviga zvehurumende izvi ndizvowo zvakare zvikoro zvine varairidzi vari kutambira mari shoma zvakanyanya.
ARTUZ inotiwo nharaunda dzekumaruwa dzine zvikoro izvi hadzisi kuwaniswawo mashoko azere pamusoro penzira dzekudzivirira nadzo Covid-19, izvo zviri kuzoita kuti vana vakawanda vasapfeka zvinovhara miromo nemhino, kana kuti ma mask, uye kusageza maoko avo nguva dzose.
Mutungamiri wesangano iri, VaObert Masaraure, vanoti ongororo yavo inokurudzira hurumende kuti iwanise zvikoro zvose zvikwanisiro zvekudzivirira Covid-19 kuitira kuti vana pamwe nevarairidzi vabude munjodzi yavakatarisana nayo.
Studio 7 yabata mutauriri webazi redzidzo yepasi, VaTaungana Ndoro, avo vanoti bazi ravo riri kugutsikanafara zvikuru nekuti vadzidzi vevadzidzisi vakanga vabatwa neCovid-19 pakavhurwa zvikoro vakapona.
"Bazi rePrimary beSecondary rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa nehutachiwana hweCovid-19 pakatanga term ino vazhinji vakaita anonzi ma recoveries, vekuSacred Heart nekunana Embakwe zvekuti izvezvi izvi nemhaka yemaStandard Operating Procedures edu vaya vane ma active cases vakadziikira zvikuru," vanodaro VaNdoro.
VaNdoro vanoti vakaitawo gwaro ravo avo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu, uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo.